नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : रामप्रसाद खनाल आफै पनि रुँदै रुँदै गाएको गीत !
रामप्रसाद खनाल आफै पनि रुँदै रुँदै गाएको गीत !
लामो समय देखी तपाईंहरुले प्रतिक्षा गरेको मेरो नयाँ लोक आधुनिक गीत रिलिज भयो । यो गीत मेरो आफ्नै कहानी पनि हो र सँगसँगै बिदेशमा बस्ने करिब एक करोड नेपाली र देश भित्रै पनि आफन्तजन सँग सँगै बस्न नपाएका लाखौं लाख नेपालीको पिँडा र आँशुको गीत हो यो ।
दशैं तिहार र चाडवाडका मुखमा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरु आफन्तजनहरु कसरी मिस गर्दै रुन्छन, कसरी भक्कानिन्छन ? यो लोक आधुनिक गीतले त्यही कुरालाई जिबन्त देखाएको छ ।
यो गीत मैले मेरी हजुर आमा, आमा र सासु अनी सबैको पारीबेश लाई सम्झेर लेखेको थिएँ तर दु:खद सँयोग गीत रिलिज हुँदा मैले मेरी हजुर आमा र सासुलाई गुमाइसकेको छु तर आमा जिबित हुनुहुन्छ तसर्थ आमालाई समर्पित गरेर गाउँदैछु, गीत रिलिज गर्दैछु ।
मेरो गीतमा संगीत गर्ने भाई थानेश्वर गौतम र एर्‍ेन्जर मित्र बिबी अनुरागी प्रती बिशेष धन्यवाद । आशा छ तपाईंहरु सबैलाई अबस्य मन पर्ने नै छ । बरु हेरी सके पछि लाइक, कम्मेन्ट, शेयर गरिदिनुभएमा हामी आभारी हुने थियौँ । - रामप्रसाद खनाल
Posted by www.Nepalmother.com at 9:36 AM